Iingqungquthela zombuso kunye nezinye iingozi - i-Geofumed
Izopolitiko kunye nentando yeninzi
Izibambiso kunye nezinye iingozi
NgoJulayi, 2011 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa, Izopolitiko kunye nentando yeninzi
Emva kokuba ingxelo yeKhomishoni yeNyaniso iphume, siye sakwazi ukufunda ngokucacileyo ubungqina balabo ababevela kwelinye icala okanye enye into eyayinokwintando yenkululeko eHonduras kwiminyaka emibili edluleyo.
Ingxelo ayithethi izinto ezininzi esingazi, isigqibo esiphezulu kukuba wonke umntu unetyala lentetho esele isetyenziswe. Kodwa akayeki ukuvelisa ukuba ufunde ubungqina babantu abavela apho, kwaye lusisicacisa tha ndabuza ngubani owayekulo nkqubo, kunye nendlela abezindaba abafihla ngayo ulwazi xa lufanelana nabo kunye ukutolika ngokutsho kwevili lokugaya. Le ngxelo ibuye yabiza ukuba yintoni ukukhwabanisa kwaye ichaze ubuthathaka obukhoyo kwiziko kunye nemithetho ... siya kubona oko kwenziwa ngolu hlobo.
Emva kweminyaka emibini ye-malaise, apho sonke sihlupheka ngeendlela enye okanye ukungaxolisi kwabancinci, kuyaqhubeka kubonakala ukuba isiphumo esivelisayo sithandeka ngokwenene. Nangona kunjalo, umonakalo wokubhanjiswa komhlaba onokubangelwa kukubunjwa kwepolitiko entsha, kukubona kwam, isiphumo esihle. Ngoku sifuna ukubona indlela ezi ntshukumo ziqala ngayo ukuhlambulula, zihlambulule kwaye zenze iinjongo zabo kwiziphakamiso eziqinileyo zokulwa nokukhwabanisa, ukuxhaswa kwezopolitiko kunye nophuhliso loqoqosho.
Thetha nomhlobo olahlekelwe ngumsebenzi ngenxa yeso sizathu ekuvutheni, ngenxa yokuba inkampani yelizwe apho ayisebenzisayo yashiya njengenxalenye yemigaqo yakhe yokungatyi imali kwilizwe elingaqinisekiyo kwezopolitiko, kwaye kumxelela ukuba inzuzo evela kule nto iphantse ilahlekelwe ngumhlobo. Ngokukodwa ngenxa yokuba sele sele ineminyaka emibili edlulileyo, ixesha eliye lafaka imali ekukhangekeni umsebenzi omtsha ngomzamo ofanayo nokuba ngaba loo nto yayinye.
Ezi zinto zenzeka ngendlela ethile kumacala amabini. I-optics yalabo abasabelayo emsebenzini wethu kungabanda, kwaye akufanelekanga, kuba ukunganyaniseki kuyindlela yokuphila ngenxa yokungathathi hlangothi. Nangona kunjalo, kufuneka ufumane iindawo zokuthatha inxaxheba, kuba akukho mntu unokufuna ukuba emva kokuhamba kakhulu into yonke iya kuba yinto efanayo.
Ndiyathemba kwaye ndiza kuhamba kakuhle, kunye nokudityaniswa okufunekayo, kodwa ngaphandle kokugqithisa okundiphoqa ukuba ndifuduke ngolunye usuku, kwaye ukuba ndiya kwenza isizathu esifanayo ... intsapho. I-Enfrascarse kumzabalazo kunye nenkxalabo yaloo mbandela isimo sengqondo sokunyamekela ngokusemgangathweni; Akufanele silahlekelwe yimeko, asimele siphumelele izinto eziyanelisayo ukuba ubudlelwane bethu bentsapho bubangele ngenxa yeemeko ezibangelwa yiminyaka yokungasebenzi kwaye ezingeke ziguqulwe ngobusuku bonke.
Kufuneka ube nethemba, kodwa ungaboni; ukhumbule ukuba kula mazwe, abantu banokubetha zibambe ezitalatweni ecaleni, kwimiju- kunye nemiboniso ezizisa usapho maxa wambi izahlukahlukano ezingadibaniyo ... ungenza nokuba uye entabeni othatha iingalo kunye ekugqibeleni aphezulu ezine uyavuma ukulungisa yonke into esentlungwini yoluntu.
Ndithatha emini ukuya epakini, nandipha i-Air1 kuyo iPad, thabatha imifanekiso emininzi yezidalwa zam ekuhambeni kweebhayisikili kunye neentambo emthini. Kubonakala ngathi izolo ukuba ndibafundise ukunika iipalali zabo zokuqala.
Emva koko icinyiwe cwecwe, ndafaka ifowuni emotweni, kwaye sibeke engceni ukuze ubone iimilo esemafini zimsulwa efanayo ukuba wenza iminyaka 30 edlulileyo ... nangona kukho amanani ngoku ngaphezulu ukumangaliswa kunye Capcom zoo izilwanyana. Oko kwaye kuthinta umphefumlo wentombazana ekhanyisa amehlo am, ngokuqinisekileyo akwazi ukubetha.
Ngalesi nqaku, ndavala umcimbi we-coup d'Etat, endithethe ngayo unayo, enye, kwaye ngaphezu kwamanye ixesha
Ukuba ndiyivula kwakhona, kuya kuba kuba kukho enye inkunzi ... ezinokuthi zibe ziinyanga ezimbalwa kwizinto uColonel Buendía athetha ngazo ngexesha lakhe loLucity.
Post edlulileyo«Edlulileyo Abafundi bacinga ntoni nge-Open Source Geospatial
Post Next Kuya kufuneka sitshintshe isikhumbaOkulandelayo "